Asɔfo ntaade (1-5)
Efɔd no (6-14)
Nkatabo no (15-30)
Urim ne Tumim (30)
Nsasin no (31-35)
Abotiri no ne ade tratraa a wɔde sika kɔkɔɔ ayɛ no (36-39)
Asɔfo no ntaade a aka (40-43)
28 “Wubeyi wo nua Aaron ne ne mma afi Israelfo mu ma wɔasom sɛ asɔfo wɔ m’anim;+ Aaron+ ne ne mma+ Nadab, Abihu,+ Eleasar, ne Itamar.+ 2 Pam ntaade kronkron ma wo nua Aaron sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛhyɛ no anuonyam na ne ho ayɛ fɛ.+ 3 Wo ne adwumayɛfo a wɔn ho akokwaw* a mama wɔn nyansa*+ no nyinaa nkasa. Ma wɔmpam ntaade mma Aaron na ne ho ntew, na watumi asom sɛ ɔsɔfo wɔ m’anim. 4 “Ntaade yi na wɔmpam: nkatabo,+ efɔd,*+ nsasin,+ ataade tenten a wɔanwene no damedame, abotiri,+ ne nea ɔde bɛbɔ ne mu.+ Ma wɔnyɛ ntaade kronkron yi mma wo nua Aaron ne ne mma, na wɔnsom sɛ asɔfo wɔ m’anim. 5 Ma adwumayɛfo a wɔn ho akokwaw no mfa sika kɔkɔɔ, hama bruu, hama afasebiri, hama kɔkɔɔ, ne hama papa a wɔde yɛ nwera nyɛ ntaade no. 6 “Efɔd no, ma wɔmfa sika kɔkɔɔ, hama bruu, hama afasebiri, hama kɔkɔɔ, ne hama papa a wɔde yɛ nwera nyɛ.+ 7 Wɔmfa ade ntoto ne mmati abien no so mfa nka akyi ne anim no mmom. 8 Ɛsɛ sɛ wɔde sika kɔkɔɔ, hama bruu, hama afasebiri, hama kɔkɔɔ, ne hama papa a wɔde yɛ nwera no ara bi nwene abɔso*+ a wɔde bɛbɔ efɔd no mu; ɛno na wɔde bɛkyekyere abom kama. 9 “Afei fa abohene tuntum+ abien na kyerɛw* Israel mma no din+ wɔ so. 10 Kyerɛw din asia wɔ ɔbo baako so, na kyerɛw asia a aka no nso wɔ ɔbo baako no so; fa fi ɔpanyin so kosi akumaa so. 11 Ma obi a otumi kyerɛw ɔbo so nkyerɛw Israel mma no din wɔ abo abien no so sɛnea wɔkyerɛw ade wɔ ahyɛnsode so no.+ Fa sika kɔkɔɔ yɛ biribi te sɛ nsiase ketewa bi a wɔde abo no biara bɛtare so. 12 Fa abo abien no bobɔ efɔd no mmati so na wɔmfa nyɛ nkae abo mma Israel mma.+ Ma Aaron mfa wɔn din a ɛwɔ ne mmati abien so no mmra Yehowa anim, na ɛnyɛ nkae mma Israel mma. 13 Fa sika kɔkɔɔ yɛ nsiase, 14 na fa sika kɔkɔɔ amapa nwene biribi te sɛ nhama+ abien suso nsiase+ no mu. 15 “Ma obi a onim ade nwene nyɛ atemmu nkatabo+ no. Ma ɔmfa sika kɔkɔɔ, hama bruu, hama afasebiri, hama kɔkɔɔ, ne hama papa a wɔde yɛ nwera nyɛ no te sɛ efɔd no.+ 16 Sɛ wobu to so abien a, n’afã anan nyinaa bɛyɛ pɛ; ma ne ntwemu nyɛ nsayam abiɛsa,* na ne tɛtrɛtɛ nso nyɛ nsayam abiɛsa. 17 Fa abohene tetare mu, na ɛnsesã so anan. Ma nsãso a edi kan no nyɛ abohene kɔkɔɔ, topas abohene, ne ahabammonobo. 18 Nsãso a ɛto so abien no bɛyɛ nsrammabo, hoabo, ne ahwehwɛbo. 19 Nsãso a ɛto so abiɛsa no bɛyɛ akutuhonobo, mfrafraebo, ne beredumbo. 20 Nsãso a ɛto so anan no bɛyɛ sikaberebo, abohene tuntum, ne abohene ahabammono. Fa sika kɔkɔɔ yɛ nsiase a wɔde abohene no biara bɛtare so. 21 Israel mma 12 no, kyerɛw wɔn mu biara din wɔ ɔbo baako so. Kyerɛw no sɛnea wɔkyerɛw ade wɔ ahyɛnsode so, na ebiara nnyina hɔ mma Israel mmusuakuw 12 no mu baako. 22 “Fa sika kɔkɔɔ amapa nwene biribi te sɛ hama toto nkatabo no anoano hyia.+ 23 Fa sika kɔkɔɔ yɛ nkawa abien a wode bɛhyehyɛ nkatabo no soro, na fa nkawa abien no hyehyɛ nkatabo no ano wɔ ha ne ha. 24 Fa nhama abien a wode sika kɔkɔɔ ayɛ no hyehyɛ nkawa abien no mu wɔ nkatabo no ano wɔ ha ne ha. 25 Sika kɔkɔɔ nhama abien no fã a aka no, fa fa efɔd no anim kɔhyehyɛ nsiase no mu wɔ efɔd no mmati so. 26 Fa sika kɔkɔɔ yɛ nkawa abien fa hyehyɛ nkatabo no fã a wobebu ato so no anoano.+ 27 San fa sika kɔkɔɔ yɛ nkawa abien fa hyehyɛ efɔd no mu wɔ abɔso no soro kakra.+ 28 Nkawa a ɛwɔ efɔd no mu no, fa hama bruu hyehyɛ mu, na san fa kyekyere nkatabo no nkawa mu bɔ efɔd no mu, sɛnea ɛbɛyɛ a nkatabo no bɛda efɔd no so yiye wɔ abɔso no soro. 29 “Israel mma din a ɛbobɔ atemmu nkatabo no so wɔ Aaron koko* so no, ma ɔmfa mmra Kronkronbea hɔ na Yehowa mfa nkae wɔn daa. 30 Sɛ Aaron reba Yehowa anim a, fa Urim ne Tumim*+ no hyehyɛ atemmu nkatabo no mu na ɛmmɔ ne koko so. Saa ade yi a wogyina so si gyinae ma Israelfo no, ɛsɛ sɛ Aaron ma ɛda ne koko so daa wɔ Yehowa anim. 31 “Nsasin a ɔbɛhyɛ wɔ efɔd no ase no, fa hama bruu nkutoo yɛ.+ 32 Twa ataade no mfinimfini fa yɛ ne kɔn na ma obi a ɔnwene ade nnwene ano nhyia. Yɛ ne kɔn no sɛ dade akotaade kɔn na antew amfa mu. 33 Fa hama bruu, hama afasebiri, ne hama kɔkɔɔ nwene granate akutu* sensɛn ano hyia. Afei yɛ sika kɔkɔɔ adɔmma hyehyɛ granate akutu no ntam. 34 Enti granate akutu biara akyi no, sika kɔkɔɔ adɔmma toa so; ma ɛnsesa so wɔ nsasin no ano nhyia. 35 Aaron bɛhyɛ ataade yi de asom. Sɛ ɔkɔ tenabea kronkron hɔ kogyina Yehowa anim a, wɔbɛte sɛ adɔmma no regyigye, na opue nso a, wɔbɛte. Ma ɔnyɛ saa na wanwu.+ 36 “Afei fa sika kɔkɔɔ amapa yɛ ade tratraa hyɛnn bi, na kyerɛw so sɛnea wɔkyerɛw ade wɔ ahyɛnsode so. Kyerɛw so sɛ: ‘Yehowa ne Ɔkronkronni no.’+ 37 Fa hama bruu so mu, na fa bɔ abotiri no anim.+ 38 Ma ɛmmɔ Aaron moma so, sɛnea ɛbɛyɛ a nneɛma kronkron+ a Israelfo ahyira so de rebɛyɛ akyɛde kronkron no, sɛ obi di mfomso ma ne ho ba asɛm wɔ ho a, Aaron bɛsoa bɔne no. Ɛmmɔ ne moma so daa na ama Yehowa ani asɔ wɔn. 39 “Fa hama papa a wɔde yɛ nwera yɛ ataade tenten; yɛ no damedame, na fa nwera pa yɛ abotiri na nwene nea ɔde bɛbɔ ne mu nso.+ 40 “Aaron mma no nso,+ yɛ ntaade tenten, nea wɔde bɛbɔ wɔn mu ne abotiri sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛhyɛ wɔn anuonyam na wɔn ho ayɛ fɛ.+ 41 Fa ntaade no hyehyɛ wo nua Aaron ne ne mma, na fa ngo sra wɔn+ fa hyɛ wɔn asɔfo.*+ Tew wɔn ho na wɔnsom sɛ asɔfo wɔ m’anim. 42 Afei fa nwera pam nika* na wɔmfa nkata wɔn adagyaw so.+ Ɛsɛ sɛ ɛkata wɔn ho fi wɔn sisi kosi wɔn srɛ. 43 Bere biara a Aaron ne ne mma bɛba ahyiae ntamadan no mu anaa wɔbɛba afɔremuka no ho abɛsom wɔ kronkronbea hɔ no, ɛsɛ sɛ wɔhyɛ na wɔanni fɔ amma wɔanwuwu. Ɛyɛ ahyɛde a ɔne ne mma* bedi so daa.
^ Nt., “mede nyansa honhom ahyɛ wɔn mu.”
^ Anaa “kurukyerɛw.”
^ Nt., “fa tumi hyɛ wɔn nsa.”